प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो विवादमा सर्वोच्वकाे यस्तो आदेश! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो विवादमा सर्वोच्वकाे यस्तो आदेश!
प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो विवादमा सर्वोच्वकाे यस्तो आदेश!
admin July 6, 2019 Uncategorized	0
काठमाडौं । पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको छाउनीस्थित घरजग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । अब उक्त मुद्दामा फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चमा दाइजोसम्बन्धि उक्त विवाद यसअघि दुई पटक सुनुवाई भएर टुंगिएको थियो ।
छाउनीको झण्डै १५ रोपनी घरजग्गा दाइजो पाएको दाबी गर्दै प्रेरणाले सर्वोच्चकै पूर्वफैसलाविरुद्ध अर्को रिट दिएकी थिइन् । राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन रोक, एकाएक किन रोकियो? हेर्नुस्
Sun City अपार्टमेन्ट भित्रको अवस्था के छ, सेक्युरिटी गार्ड यस्तो भन्छन् ! चुनावमा सँक्रमित सहित २८५ जना भेला थिए (भिडियो हेर्नुस)
आमाको मुख हेर्ने दिन बृद्दाश्रम बाट छोरालाइ चिट्ठी ‘ छोरा मेरो लासलाई दागबत्ती दिनु पर्दैन….’ मन थामेर पढ्नुहोला।